हजारको व्यवसाय लाखमा परिणत गर्दै हस्तकलाका महिला उद्यमी - Experience Best News from Nepal
हजारको व्यवसाय लाखमा परिणत गर्दै हस्तकलाका महिला उद्यमी
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन ११, २०७३
पुनहरि बेल्बासे, भैरहवा । पछिल्लो समयमा नेपालमा केही हुँदैन भन्दै विदेशीनेहरूको लहर चलेको छ । नेपालबाट उडान नहुने देशहरूमा भारतको बाटो प्रयोग गरेर विदेशीने पुरूष मात्र होइन महिलाहरू पनि उत्तिकै छन् । यस्तो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि ज्यान जोखिममा राखेर घरपरिवारलाई बिर्सेर बिदेशिनेको संख्या बढ्दो छ ।
तर त्यो भन्दा फरक छ सिद्धार्थनगर १३ हाटबजामा एमजी गिफ्ट पसल सञ्चालन गर्दै आएकी पिंकी श्रेष्ठको । चार वर्ष अघि १५ सयको लगानीमा डल बानाउने पसल खोलेकी उनले अहिले ४ जनाको परिवारको चलाएर दैनिक ३ सय सहकारीमा जम्मा गर्दै पसललाई अहिले २ ला
सपना हस्तकला केन्द्रकी सञ्चालक सपना पोखरेल
ख बराबरको बनाएकी छन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाकै बसन्तपथमा सपना हस्तकला केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकी सपना पोखरेलको घरको काम सकाएर फुर्सदको समयमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको डल व्यवसायले ५ जना परिवार पाल्ने राम्रो स्रोत बनेको छ । घरको काम सँगसँगै गुडिया (गणेश, जिराफ, किट्टी, कुकुर, कुसन, हट) लगायतका हस्तकला सामग्रीलाई आयस्रोत बनाएकी छन् । बसन्त पथकै यमुना चौधरीले पनि ३ वर्षदेखि गुडिया पसलबाटै पाँच जनाको परिवार पाल्ने गरेकी छन् ।
बसन्त पथकै मान्यता गिफ्ट पसलकी मैना भाट क्षेत्री पसल खोलपछि ४ जनाको खर्च आफै चलाउने गरेको दावी गर्छिन् । भाटका अनुसार गुडिया ब्यापारबाट दैनिक २५ सम्म छ ।
त्यस्तै कस्मेटिक पसल खोलेकी विष्णुमाया भूसालको विचारमा पनि ज्यानको जोखिममा राखेर बालबच्चालाई छाडेर बिदेशीनु भन्दा सानो भएपनि आफ्नो व्यवसाय गर्नु उत्तम मान्छिन् ।
२०६८ सालमा सि.न.पा. ८, अन्नपूर्णटोलमा विकिता कस्मेटिक पसल शुरू गरेर अहिले आफ्नो ४ जनाको परिवारको घर खर्च चलाएको र दैनिक अहिले सहकारीमा ४ सय रूपैंया जम्मा गर्दै आएको उनी बताउँछिन् ।
अन्नपूर्ण टोलबाट एक लाखको लगानीमा सुरू गरेको व्यवसाय ६ लाखको बनेको छ । त्यसमा आफू मात्र नभएर अहिले ५ जनाले रोजगारी समेत पाएका छन् ।
२०६४ सालमा करिब ४० हजारको लगानीमा सुरु भएको शाइन कस्मेटिक एण्ड ब्युटिपार्लरअहिले ६ जनाको परिवार पाल्ने स्रोत बनेको छ । शुरूवातको अवस्थामा बन्द गर्नेकी भन्ने सोचमा पुगेकी सिमा कोइरालाको दैनिक ८÷९ हजारसम्मको व्यापार हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले महिला विकासको लागि सिलाई कटाई र बुटिक तालिमको लागि ६ लाख ३० हजार ३ सय ३० रूपैंया खर्च गरेर पोर्जेक्ट सञ्चालन ग¥यो तर नगरपालिकाले दिएको तालिमबाट महिलाहरू व्यवसायी बन्न सकेका छैनन् । विकासको लागि भन्दै रकम खर्च भयो तर व्यवसायी बन्न नसकेपछि तालिमको कुनै औचित्य हुँदैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिका सामाजिक विकास शाखाका शाखा अधिकृत शेखरनाथ पन्थी भन्छन्, प्रोजेट सक्यिो अब महिलाहरू घरमा च्यातिएका आफ्नो लुगाहरू सिलाउन सक्ने भए । नगरपालिकाले ३ महिनाको खर्च ग¥यो तर त्यो खर्च सही ठाउँमा सदुपयोग हुन नसक्दा खर्च बेकार भएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिले घरमा च्यातिएका कपडा सिलाउन सक्ने भए भनेपछि कसरी सफल हुन सक्छ त्यो योजना ।
घरमा च्यातिएको कपडा सिलाउन त पक्कै पनि ३ महिना तालिम लिनु पर्दैनथ्यो । सम्बन्धित निकायले राम्रो सँग ध्यान नदिँदा व्यवसायी बन्न सकेका छैनन् ।
अब एसईईको परीक्षा फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने
कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
कक्षा ११ को नतिजा सार्वजनिक !! यसरी हेर्नुहोस नतिजा
नेपालमा खोई यौन शिक्षा? बलात्कारको शिकार रोक्ने माध्यम होइन र !!
यसरी थप्दै छ सरकारले ६० हजार शिक्षक